Sarkaalka Sare ee Isgaarsiinta
Katie Parrish waxay u adeegtaa sidii sarkaalka sare ee isgaarsiinta ee McKnight, iyada oo gacan ka geysaneysa horumarinta hadafka iyo barnaamijyada Aasaaska iyada oo loo marayo isgaarsiin istiraatiiji ah. Waxay nagu soo biirtay bishii Luulyo 2021 kadib in ka badan toban sano oo ay ku jirtay ololeyaal u -doodid hoose.
Markii hore, Parrish wuxuu ka soo shaqeeyay doorka isgaarsiinta sare ee Muwaadinka Dadweynaha, Buundada 21 -aad ee Ameerika, iyo Michigan League of Conservation Voters. Boosaskan, waxay hormuud ka ahayd barnaamijyo isgaarsiineed oo baaxad leh kuwaas oo isku daray warbaahinta dhaqanka iyo dijitaalka si ay u qaabeeyaan daboolidda wararka, saamayn ugu yeeshaan doodaha siyaasadda, iyo abaabulka codbixiyeyaasha.
Qabanqaabiyaha wadnaha, Parrish waxay shaqadeeda ka bilowday gobolka ay ku nooshahay ee Florida, halkaas oo ay ku hoggaamisay olole hoose si loo mamnuuco qodista xeebaha ka dib markii uu daatay saliidda Deepwater Horizon. Waxay markaa sii wadday inay maamusho Barnaamijka Iskuduwaha Hoggaamiyayaasha Cimilada ee Machadka Cusub ee Abaabulka, kaas oo shaqaaleysiiyay oo tababbaray u ololeeyayaal kuna meeleeyay ololeyaal caddaaladda cimilada maxalliga ah ee Mareykanka oo dhan
Parrish ayaa markii dambe u dhaqaaqday abaabulka dhijitaalka ah, iyada oo ka shaqaysa istiraatiijiyad ka ah Studio-yaasha Xorta ah, halkaas oo ay ka caawisay macaamiisha sida Greenpeace, Isbahaysiga Biyaha, iyo Isbahaysiga Waxbarashada Cimilada naqshadeynta ololayaal dijitaal ah oo heer sare ah oo kor u qaaday xubinnimada iyo ka qaybgalayaasha dhagaystayaasha cusub.
Parrish wuxuu ka qalin jabiyay Jaamacadda Bartamaha Florida isagoo haysta shahaadada Bachelor of Arts ee Cilmiga Siyaasadda waana murashaxa Master of Public Affairs ee Jaamacadda Indiana.